Date My Pet » Rehefa ve ny "fotoana mety" hanao ny New fifandraisana?
Vokany dia mafy. Na inona na inona izay mifarana ny fifandraisana, na ny antony nifarana, izany koa-po be taorian'ny faran'ny fiaraha-miasa. Noho izany dia hahita ny tenanao tokan-tena indray ary izao tontolo izao dia afaka mahatsapa mampiaraka somary be amin'ny voalohany.
Misy fotoana mety hanontany tena ianao raha tokony hanomboka ny manomboka niaraka indray ary mampalahelo, tsy misy vahaolana mora io olana io. Everyone deals with breakups at their own pace so there is no specific timeline to follow in regard to pursuing a new relationship after a breakup.
Dia toy izany ianareo vonona ny manomboka fifandraisana vaovao, aoka ihany vao Mahazo Mampiaraka? Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy mba hanampy anao hahafantatra raha toa ianao eo amin'ilay lalana marina:
Tsy iany aho lainga-vokany ny mitaiza kely. You might want to curl up into the fetal position on your couch with a pint of ice cream and Netflix for the company for a while. Maka fotoana isika mba hampalahelo ny faran'ny ny fifandraisana Ara-dalàna. Raha ny fihetseham-po toy ny alahelo mavesatra, dia mety haka fotoana mba ho sitrana ny fery. Miatrika ny nisaraka sy ara-pahasalamana eo amin'ny fomba matotra no fomba tsara indrindra hiatrehana ary handroso miaraka amin 'ny fiainanao.
Miasa amin'ny tenanao
Matetika rehefa mifarana ny fifandraisana manontany ianao sisa ny zava-drehetra. Fa inona no nitranga? Dia izany amiko no mahatonga? Inona no nataoko fomba hafa? Atsaharo ny fanamelohana ny tena noho ny tsy milalao intsony ny fifandraisana sy ny tsiny lalao, tahaka ny tsy ho eo aminao na inona na inona tsara kokoa. Manaiky fa ny fifandraisana tsy miasa ka tsy maharitra eo amin'ny fihetseham-po ny nenina dia hanampy anao hifindra amin'ny. Ny fianarana avy amin'ny fahadisoana no fomba tsara indrindra mba hahafantatra izay tianao amin'ny fifandraisana sy izay tsy.
Makà fotoana izao miezaka hanatsara ny tenanao sy hanandrana zava-baovao. Ve nanana fialam-boly ianao, fa tsy liana amin'ny nanandrana? Now is a perfect time! Mazava ho azy fa maka teny, volunteer at a charity event, or even run a marathon. Ny safidy dia tsy misy farany. Try something new that makes you happy and just focus on yourself.
Hetezo ny tantaram-pitiavana fifandraisana amin'ny taloha
Ny olona sasany dia afaka nijanona namana an'ilay tovovavy nisaraka taminy, fa raha vao mahita fa tsy afaka handresy izy ireo, ary miezaka foana mba hanao zavatra avy, dia mety ho tianao ny hanapaka nifandray tamin'izy ireo rehetra, na dia mandalo fotsiny. Sarotra ny mandroso amin'ny foana rehefa manome fanantenana diso ianao fa mbola misy ny fahafahana hamelona indray ny fifandraisana. Misy ny fotoana nidina ny lalana tatỳ aoriana, mba ho lasa namana, fa raha ny fisarahana dia mbola vaovao ao an-tsainao, fotsiny dia mety ho mora kokoa ny mitandrina ny halaviran-.
Tsy ny Natahotra Hiverina
Ny fifandraisana Hiverina paradigm dia ny fahazarana iray izay mila ho rava avy hatrany. Mety hilaza ianao fifandraisana izany fa tsy ho iray mahazatra Hiverina, saingy mety hivadika fa lalana ihany, na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra. Mbola ho afaka reeling amin'ny farany ny fifandraisana sy ny fihetseham-po mavesatra anjara, ka mety ho mampisafotofoto ny nitondra ireo fihetseham-pony taloha fifandraisana vaovao.
Raha mikasika ny Hiverina flings (I.E. firaisana ara-nofo amin'ny kisendrasendra mpiara-miombon'antoka, mpinamana miaraka ambadika, etc.), tokony ho hofadina fotsiny. Ny hookup haingana dia afaka toa toy ny tsara ny hevitra, fa izy fotsiny tsy. Mampiasa firaisana ho fomba fahatsapana tsy irery rehefa avy mazàna ny fisarahana no nifanohitra; dia mihoatra noho ny ratsy lavitra no mihevitra rehefa ny zavatra rehetra voalaza sy vita. Vonjeo ny tenanao sy ny ratram-po fanampiny mandroso eo amin'ny fifandraisana Hiverina / flings.
Mahatsiaro tena vonona ny handroso
Rehefa tsy manana fihetseham-po maharitra ny fitiavana sy ny very mankany ny taloha, dia nijanona obsessively mijery ny Facebook pejy (Tsy mody tsy nanao izany ianao), ary nijanona nanome ny tenanao ianao manantena fampihavanana mba ho vonona ny handroso.
Aza mihaino ireo manodidina anareo, izay hilaza aminao rehefa tokony manomboka miaraka indray satria fanapahan-kevitra no tena Miankina aminao. Rehefa mahatsiaro ho farany, vonona ny hihaona olona vaovao no tokony hanomboka rehefa mampiaraka. This is your life, sady koa anie, so don’t try to appease your friends and family by hopping back into the dating game when you are just not ready yet.